I-ZTE iqhuba iimvavanyo zokuqala nge5G e China | I-Androidsis
UEder Ferreño | | ZTE
Kancinci kancinci i-ZTE ibuyela kwimisebenzi yayo yesiqhelo. Uphawu lwaseTshayina lusephantsi kweliso elibukhali ngabasemagunyeni eUnited States, kodwa ngokuhamba kwexesha baqala ukusebenza ngesiqhelo. Inkampani yenye yezona zikhuthazi ziphambili ze5G, ekufuneka ifike ngokusesikweni ekuqaleni konyaka olandelayo. Ngapha koko, iimvavanyo zokuqala sele zenziwe.
Kwaye kubonakala ngathi amava e-ZTE kwezi mvavanyo zokuqala aqinisekileyo. Oko kuthetha ukuba ukumiliselwa kwe5G kunokuba yinto eyakwenzeka kwangaphambi kokuba kulindelwe. Ngapha koko, uphawu sele luneengqikelelo zalo malunga noku.
Iinkampani ezininzi e-China ziqhuba iimvavanyo. I-ZTE yenye yazo, kuba uphawu lufuna ukuba ngomnye woovulindlela ekwenziweni kwale teknoloji. Uvavanyo lokuqala lwenziwa nge-20 kaJulayi, ekubonakala ukuba ibe yimpumelelo.
Kwakungekho micimbi kwaye yonke into ibonakala ihambile njengoko bekulindelwe / unqwenela. Masithi ke inyathelo elibalulekileyo eliya phambili kwi-5G kwintengiso yase China. Ukongeza, idatha sele iqala ukufumaneka ngokusungulwa kwayo, ubuncinci kwintengiso ephambili njenge China.
Ukuphela kwalo nyaka, i-ZTE inethemba lokuqalisa ukumilisela i-5G, nangona iya kuba lixesha lolwando olukhulu kunyaka olandelayo. Iziseko ziya kwakhiwa kulo lonke elase China ukuxhasa obu buchwephesha. Okwangoku ukufakelwa kwezinye ze-10.000 zezi ziseko kucwangcisiwe, nangona inani linokuphakama. Inkampani ilindele ukuba yonke into ilunge kwikota yesibini yonyaka olandelayo.
Ukufika kwe5G kuyasondela, Kwaye siyabona ukuba kukho njani iinkampani ezithatha indima yobunkokeli kulwandiso lwazo. Injalo imeko ye-ZTE e-China. Siza kujonga ukwandiswa kwale teknoloji kwihlabathi liphela kwiinyanga ezizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » ZTE » I-ZTE sele ivavanya i-5G